China Battery Inopisa Gloves S67B fekitari uye vagadziri | Eigday
Rudzi rweBhatiri: Li-polymer
Rated Kugona: 2200mAh 16.8Wh
Yakatemwa Chaja Voltage: 8.4V
[7.4V 2200MAH Rechargeable Li-ion Mabhatiri] Magirovhosi anopisa anosanganisira bhatiri re lithiamu-ion rechargeable mabhatiri. Magurovhosi anozogara anosvika maawa masere pachigadziko chepasi, 3.5 -4 maawa pane yekumisikidza yepakati uye anenge maawa matatu pane soro-soro. Kana zvichidiwa kuita mitambo kana kushanda mukati kunze kwenguva refu, funga kuti utenge mamwe mabhatiri (anotengeswa zvakasiyana).
[Kuchenesa Zvinhu Kunovhara kumashure kwese kweruoko neminwe mishanu kusvika pamazano emunwe] iyi giravhosi yemagetsi yakagadziridzwa kuti ishandise infrared fiber yekupisa zvinhu inovhara kumashure kwese kweruoko neminwe. Magirazi anopisa emudhudhudhu anogona kuwedzera kupisa kumaoko ako.
[3 Heat Setting Controller] Iyi inopisa magiravhusi ane matatu akasiyana kupisa marongero, unogona kuzvigadzirisa zviri nyore. Rudzi rutsvuku rwe LED nderekumisikidzwa, Muchena akatungamira marara ndeye Medium marongero, Ruvara rweBlue LED iri yakadzika marongero. Funga kuchinjisa kune yakakwira kumisikidza yekutanga 20 min uchishandisa, wozo chinja kuMedium kumisikidza. Saka inogona kushandisa nguva yakareba kunze.
[Soft Breathable Material & with Touch Sensor] Iyi Heated Gloves yakashandisa isapinda mvura softshell zvinhu.Mukati neyakaipeta dehwe & yakavharika zvinhu .Pamusoro pacho magurovhosi ane ekubata sensors pane index munwe achashanda pane chero smart smart. Aya magiravhosi ekupisa anovimbiswa kupa kudziya kune simba uye kunyaradza paunenge uchiita mitambo mune inotonhora mamiriro ekunze
[100% Mari Yekudzorera garandi] 1 gore garandi.
Yakakwana Kune Yekunze Mitambo: Iwo kudziisa magurovhosi evarume nevakadzi akakwana kune akasiyana siyana emitambo yekunze mumazuva anotonhorera kana anotonhora, kunyanya akakodzera kune echando.
❖Nyowani Technology Fkana Hkudya System
* Mutungamiriri: Matatu Matanho Ekushisa Kudzora; Bluetooth tekinoroji neApp; Wireless kudzora tekinoroji; Yakakamurwa -stage controller yejasi;
* Kuchenesa Pad Zvinhu: Carbon fiber, Composite fiber, Alloy kudziyisa waya.
Ikozvino, composite fiber inochengetedzeka, yakatsiga uye inokurumidza kupisa maturo.
* Gloves Heating Pad maitiro - Yakareba kudziya pad iyo yakaputira paminwe mishanu, saka zvigunwe zvakare zvinopisa, kwete muminwe mishanu chete.
❖ Hkudya Solution: 3.7V / 5V / 7.4V / 12V
Chitupa cheFekitori: ISO / SGS / COSTCO GMP Kuongorora
Kushata Magorovhosi / masokisi chitupa: CE / FCC / UL / ROHS
Kuchenesa Sisitimu: CE / FCC / UL / ROHS / PSE
Pashure: Wt004 bhachi
Zvadaro: Bhatiri Inodziya Midhudhudhu Giravhosi NaEC S28B
Rechargeable Battery Inopisa Glove Liner Mutete Iye ...
MUPONESI Outdoor Waterproof Windproof nenharo Glov ...